Ukuphupha okumhlophe Discover Discover Discover online ▷ ➡️
Kwinkcubeko yethu, umbala omhlophe uhlala ubonakalisa ubumsulwa kunye nobumsulwa. Uninzi lwabasetyhini batshata ngengubo emhlophe yomtshato, kodwa naphakathi kweminye imisitho yecawa, enje ngobhaptizo okanye umthendeleko, kusoloko kusetyenziswa umthunzi weentyatyambo ezimhlophe. Ngokwesiko, oku kuyinyani ngokukodwa kumantombazana okanye kwabasetyhini. Kwangelo xesha, xa abantu becinga ngombala omhlophe, bakwacinga ngokuzahlula kwesibhedlele. Kule meko, umhlophe ubonwa ngakumbi njengombala obandayo onxulunyaniswa nembonakalo embi.
Ngapha koko, umhlophe ukwadlala indima ekutolikeni amaphupha: kunokwenzeka ukuba abantu banamaphupha abawabona "njengamaphupha amhlophe." Unobangela unokuba kukugxila ngokuqinileyo kwinto ethile emhlophe, okanye isixa esikhulu sayo ephupheni. Njengophawu lwephupha, umbala omhlophe uneentsingiselo ezahlukeneyo.
1 Isimboli yephupha «emhlophe» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Umqondiso wephupha «emhlophe» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «emhlophe» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «emhlophe» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko, umbala omhlophe uthathelwa ingqalelo njengowesifazana, oko kuthetha ukuba unxulunyaniswa nezinto ezithile zobufazi. Ephupheni, ngokwenkcazo ngokubanzi, umele ngokukodwa ubumsulwa, kodwa kunye ne ubunyulu y Ukucaca.
Kwangelo xesha, nangona kunjalo, ikwalatha kwi Umngcipheko ukulala, kuba umhlophe ungcola ngokulula kwaye ke kufuneka uphathwe ngenkathalo. Umntu ochaphazelekayo kufuneka aqonde uphawu lwephupha njengesicelo sokucinga kwakhona ngobomi bakhe bokwenyani. Ngaba kunokwenzeka ukuba umntu othile ukuphoxile okanye wakukhathaza?
Kuba umhlophe ukwadibanisa imibala eyahlukeneyo, lo mbala unakho (ukukhanyisa) ngokotoliko jikelele emaphupheni. bulumko Kwaye, kunye nayo, ibonisa amandla. Kwakhona, "amaphupha amhlophe" anokuchaphazela enye Isiqalo esitsha bonisa ebomini bephupha.
Isimboli ye-yin-yang emnyama nomhlophe ephupheni ihlala ibonisa ukungqinelana okungqinelanayo kwezichasi. Njengephupha, ikalika emhlophe ihlala izisa amaxesha anzima kunye nophuhliso olungathandekiyo. Ukubona kwembewu emhlophe yemastadi kuhlala kukhuthaza ukukhula komzimba. Ibhola yebhola yebhodi yebhodi ephupheni ingaqondwa njengophawu olungathandekiyo el mundo ukuvuka kwiimeko ezininzi. Nabani na obona intyatyambo enamagqabi amhlophe njengekhephu ephupheni uzibona ejongene nobunyulu nobumsulwa bakhe.
Ukuba ubona isosi emhlophe ngelixa ulele, kufuneka ubeke esweni impilo yakho. I-bacon emhlophe okanye i-marshmallows zihlala zibonelela ngothuthuzelo kulowo uphuphayo. Iitheniphu ezimhlophe zihlala zilumkisa ngemeko eyingozi ephupheni. I-bark emhlophe ye-birch ihlala izisa isilumkiso sokuba ungathembi kangako.
Kukuthini ukutolikwa okunokwenzeka okunene kusebenza kwiphupha elithile kuxhomekeke ikakhulu kwimeko yephupha elo. Ngaba umbala omhlophe waba nefuthe njani? Waziva njani lomntu kuthethwa ngaye?
Umqondiso wephupha «emhlophe» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokutolika kwengqondo, "amaphupha amhlophe" ahlala enesilumkiso: umntu ekuthethwa ngaye unokuba nawo Yintlungu malunga nokuba sempilweni kwabo ngokwasemzimbeni. Kwimeko yengqondo, umhlophe uhlala enxulunyaniswa nezibhedlele.
Ngokwesiseko, iphupha libonisa into yokuba lo mntu kuthethwa ngaye ukhathazekile malunga nokugula kakhulu okanye nokufa. Kwiimeko ezithile, olu loyiko lunokubonwa kuphela ngokungazi, oko kukuthi, hayi kwinqanaba lokuqonda, kodwa kufuneka kodwa ke lithathelwe ingqalelo emva kwephupha elinjalo.
Kuba umhlophe sisiphumo sokwakheka kwayo yonke imibala, abanye abantu abayithathi njengombala wokwenyani ngengqondo engqongqo yegama. Kungenxa yoko le nto inokuba liphupha ngokwendlela yokuqonda kwengqondo Ukuba lilize kwangaphakathi uphawu. Ukuphupha kusenokwenzeka ukuba kuyaphazamiseka, awazi ukuba usondela njani kwinto ethile.
Isimboli yephupha «emhlophe» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa ngokwasemoyeni kwamaphupha, umbala omhlophe umele enye. ubunyulu bokomoya. Idibanisa yonke imibala kwaye yiyo loo nto ikwabonisa ubulumko nolwazi.